Dowladda Qatar oo malaayiin doolar ku kabaysa miisaaniydda dowladda Soomaaliya – Radio Daljir
Dowladda Qatar oo malaayiin doolar ku kabaysa miisaaniydda dowladda Soomaaliya
Febraayo 28, 2019 7:42 b 0
Wakaaladda wararka ee dalka Qatar ayaa laga soo xigtay dowladda Qatar inay malaayiin doola sanadkan 2019 ku kabayso miisaaniyadda dowladda faderaalka ee Soomaaliya.
Yaboohan lacageed waxa uu ka dhashay kulan Arbacadii shalay magaalada Doxa ku dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka dalka Qadar Tamiim bin Xamaad Al-thaani.
Dowladda Qadar waxey kaloo sheegtay in lacagtan Malaayiinka doolar ah ay ku kabayaan miisaaniyada dowladda Soomaaliya ee sanadkan bilowga ah ee 2019.
Kulanka Farmaajo iyo Tamiim ayaa sidoo kale la iskula gartay dardargelinta mashaariicda horumarineed ee ay Dowladda Qadar ka fulinayso Soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee Soomaaliya iyo isu socodka badeecadaha iyo dadweynaha.
Qadar ayaa ah taageeraha Koowaad ee Villa Somalia, illaa Ololihii doorashada Madaxweyne Farmaajo ayay si toos iyo si dadban u taageereysay, waxaana loo arkaa mid ka mid ah saaxibada ugu weyn ee xilligan ay Soomaaliya heysato.
Sanad gudihiis Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa booqasho dhowr ah ku tagay dalkaas, waxaana Madaxweyne Farmaajo qudhiisa labo jeer uu booqday dalkaas, halka Ra’iisul Wasaaraha uu labo jeer tagay labadii sano ee ay talada dalka hayeen.
Dowlada Qadar ayaa maalgelineysa dhismaha wadooyinkan isku xira magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo Jowhar oo ka kala tirsan Gobolada Banaadir iyo Labada Shabeelle, iyadoo Ra’iisul Wasaare Kheyre uu dhagax dhigay mashrucaas 18-kii bishan.